सुँगुरको कबाब रेसिपी घरमा सबैका लागि उपयोगी जानकारी
इमान्दार हुन, म पकाउन मन पराउँछु। र मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो आनन्द कुनै कुरो हो यदि यदि डिश मेरो परिवारको स्वाद हो भने। यस अवस्थामा, म रेसिपीका सबै सूक्ष्मताहरूलाई ध्यानमा राख्ने प्रयास गर्दछु र पछाडि ठ्याक्कै रेसिपी पछ्याउँछु ताकि परिणाम फेरि सकारात्मक हुन्छ।
वर्षौं बर्षमा मैले बार्बेक्युको लागि मासुलाई मिलाउने र यसको तयारी कसरी गर्ने भनेर एक तरीका तयार पारेको छु। जुन म अहिले सेयर गर्न चाहन्छु। बजारमा उपलब्धबाट: गाईको मासु, सुँगुर, भेडा, कुखुरा, हामी पोर्क अधिक मन पराउछौं। तपाईंले क्लिपिंग लिनु पर्छ। यस स्थानमा मासु कडा छैन र तुलनात्मक रूपमा ठूलो टुक्रा मा पकाउन सबै भन्दा उपयुक्त छ। मैले cub बाई enti सेन्टीमिटर आकारको समान घन टुक्रा काट्यो। मासु डिफ्रोस्ट हुनुपर्दछ।
काटने पछि, मैले यसलाई २- liters लिटरको मात्राको साथ स्टेनलेस स्टीलको प्यानमा राख्छ र स्वादका लागि नुन र कालो मिर्चले छर्कन्छु। म राम्रोसँग मिक्स गर्छु र जारलाई त्यहि ठाउँमा राख्छु मेयोनेज "प्रोभेन्कल"। १ grams० ग्राम पर्याप्त छ। मुख्य कुरा यो हो कि सबै टुक्राहरू हल्कासँग मेयोनेजको साथ लेप गरिएको हुन्छ। र म यसलाई केहि घण्टा फ्रिजमा छोड्छु। ठीक छ, मानौं, बिहान हामी बेलुकाको खाना पकाउँदछौं।
खाना पकाउन बार्बेक्युमा ईंटको फाइदा
जब मांस म्यारिनेट गरिएको छ, म तपाईंलाई ग्रिलको बारेमा बताउनेछु। सबै भन्दा राम्रो, मेरो विचारमा, बार्बेक्यू किनारमा राखिएको ईंटबाट जमीनमा राखिएको आयत हो। आठ इट्टाको आयत भित्र, म आगो बनाउँछु। म बर्चको दाउरा लिन्छु। यो सम्भव छ केही एस्पेन काठको साथ। दाउरा पूर्ण रूपमा जलाउनु पर्छ, कोइलामा। यदि एक वा दुई इम्बरहरू जलाउँदैनन् भने, म तिनीहरूलाई अर्को चोटि ग्रिलबाट हटाउँछु। यस अवस्थामा ईंटाले राम्रोसँग न्यानो पार्नेछ, इन्फ्रारेड तातो उत्सर्जन गर्दछ। यसैले म यो विधिलाई धातु बार्बेक्युमा रुचाउँछु।
भुसुने मासुको लागि आगो जलाउने उत्तम तरिका के हो
इग्निशनको लागि तरल पदार्थको आवश्यकताको कारणले मैले वाणिज्य कोइला प्रयोग गर्दिन। मलाई शंका छ कि कुनै हानिकारक धूँव बाँकी छैन सायद सापेक्षिक रूपमा, म बहस गर्ने छैन। जस्तो तपाईले बुझ्नुहुन्छ, म निजी घरमा बस्दछु, र साइटको क्षेत्रले तपाईंलाई बगैंचाको बीचमा आगो बनाउन दिन्छ। तर पछिल्लो समयमा मैले पुरानो फलामको सौना स्टोभमा कोइला जलाउँदैछु। जुन गर्मीमा कुखुराको लागि आलु पकाउन सेट गरिएको छ। यो पक्कै पनि यस तरीकाले सुरक्षित छ।
बार्बेक्युको लागि मासु तयार गर्दै
र त्यसोभए, ज almost्गलहरू लगभग जलेको छ, कुनै ठूलो ज्वाला छैन। आधा घण्टामा, कोइला तयार हुनेछ। तपाईं skewers मा स्ट्रिंग मासु जान सक्नुहुन्छ। मसँग सपाट skewers र त्रिकोणीय आकारहरू छन्। मैले तुरून्तै भन्नुपर्दछ कि समतल व्यक्तिहरू अधिक सुविधाजनक हुन्छन्। तथ्य यो हो कि तिनीहरू आवधिक रूपमा १ 180० डिग्री घुमाउनु आवश्यक छ। र त्रिकोणीय skewers संग यो बाहिर सजीलो सजीलो छैन। मैले तिनीहरूलाई तुरुन्तै सोच्न बिना किन्नुभयो। र त्यसपछि यो व्यवहारमा बाहिर आयो। र मसँग सपाट, घर बनाउनेहरू छन्।
म skewers मा मात्र मासु स्ट्रिंग। म प्याज, टमाटर, आदि प्रयोग गर्दिन। यो सबै समाप्त डिश संग अलग सेवारत छ। केवल केही चीज म कहिलेकाहीँ मासुको टुक्राहरूका बीचमा बेकनको सानो टुक्रा बनाउँदछ र एक अर्कोसँग कडासँग। रसदारताको लागि। म पहिलो (चरम) साना टुक्रा बनाउन प्रयास गर्छु। तिनीहरू थोरै ढिलो पकाउन चाहन्छन्। बाँकी को लागी, कुनै बुद्धिमत्ता छैन। बाहेक, सायद, एक। यदि एक बिभिन्न आकारको एक टुक्रा आयो, त्यसपछि, पक्कै पनि, हामी यसलाई छेड्छौं। ताकि खाना पकाउँदा पनि धेरै ह्या hang्ग हुँदैन। सबै हामी ब्रेजीयरमा बोक्दछौं। प्रशंसकको रूपमा काट्ने बोर्ड समात्नुहोस्। कोइलाले अझ रमाइलो खेल्नको लागि कहिलेकाँही हावामा तिनीहरूलाई हावा चलाउनु पर्छ। र सफा पानीको एक सानो कन्टेनर। यदि हाम्रो कोइला एकदम ढीला हुन्छ भने। खुला आगोलाई अनुमति छैन! इन्फ्रारेड विकिरण मात्र।
फ्राई पोर्क कबाब - नुस्खा
हामी सबै बारबेक्यू मा कोइला स्तर र एक अर्को न्यूनतम दूरी संग skewers बाहिर राख्छौं। हामी एक चरित्र हिस सुन्न। हामी सुनिश्चित गर्छौं कि त्यहाँ कुनै खुला फायर छैन। यदि आवश्यक भएमा केही पानी छर्कनुहोस्। १० मिनेट पछि, १ degrees० डिग्री घुमाउनुहोस् र १० मिनेट कुर्नुहोस्। यसैबीच, परिवारका सदस्यहरू टेबल स्थापना गर्दै छन्: रोटी र तरकारीहरू कटौती भइरहेको छ। कबाबलाई तातो खानु पर्छ। तातो संग, त्यसैले कुरा गर्न को लागी गर्मी संग! खानपान राम्रो होस्।
र आगो निभाउन नबिर्सनुहोस्। सुरक्षा पहिले आउँछ!
खनिज कबाब (कबाब): नुस्खा
कबाब - यो के हो? कसरी पकाउने, के साथ सेवा गर्ने?
स्वादिष्ट फ्राइड पाइक: तत्काल रेसिपी
भट्टीमा स्वादिष्ट र रसिलो पाईक
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 2,162 प्रश्नहरू।